Mid ka mida askartii dishay Gudoomiye Dhegajuun oo baxsaday | Dhacdo
Home Wararka Maanta Mid ka mida askartii dishay Gudoomiye Dhegajuun oo baxsaday
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa sheegay in uu baxsaday mid ka mida Ciidamadii Booliska, ee lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen dilkii xalay Magaalada Muqdisho loogu gaystay Gudoomiyihii Degmada Hodan, Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise (Dhegajuun).
Cali Cabdi Wardheere (Cali Yare), Gudoomiye Kuxigeenka Arrimaha Ammaanka & Siyaasadda ee Maamulka Gobolka Banaadir ayaa xaqiijiyay baxsadka askarigaasi.
Gudoomiye Kuxigeenka oo la hadlay BBC, waxna laga weydiiyay sida uu shilku ku dhacay ayaa yiri “Xalay goor dambe ayuu shilkani dhacay, aagga Hawlwadaag buuna ka dhacay, ciidamo ayuu gacantoodii shilkaanu ku dhacay, baaritaankii ayaana bilow ah hadda.”
Waxaa uu sheegay in dhammaan Saraakiishii iyo Ciidamadii Booliska ee goobta joogay la wada xiray, marka laga reebo hal askari oo baxsaday.
“Waxaan fahamsanahay intii shilkii meesha ka dhacay ciidan iyo Saraakiilba joogtay dhammaantood, marka laga reebo hal qof ay gacanta amniga ku jiraan, sida hay’adaha ammaanku ay warbixinta nagu siiyeen.” Ayuu yiri Cali Yare.
Muxuu yahay qofkaasi maqan oo la weydiiyay ayuu yiri “Wuxuu ka mid ahaa ciidankii halkaa joogay ee gacantooda Gudoomiyihii Degmada uu ku baxay qof ka mida weeye. Markaa shilka markuu dhacay runtii si weyn ayay laamaha ammaanka uga hawlgaleen, dhammaana gacantaa lagu soo dhigay halkaa nin mooyee.”
Cali Yare ayaa intaa ku daray “Dadka hadda xiran ee su’aalaha la weydiinayo eedeysane-yaashana waa boolis, oo ay ku jiraan laba Taliye Saldhig.”
Previous articleWasiir Beyle oo maanta booqday Safaaradda Turkiga ee Muqdisho
Next articleGalmudug oo shuruud ku sii deysay Wariye-yaashii lagu xiray Dhuusamareeb